Saturday December 26, 2015 - 19:47:39 in Sports by Web Admin
Waxaa sida aad la socotaanba galabta la ciyaaray sideed kulan oo kamid ah 10 kii kulan ee hroyaalka premier league ee maanta la ciyaari lahaa waxaana guulo gaaray kooxo saqafka sare isku eryanaya halka kuwo kalena la garaacay.
Man City iyo Liverpool ayaa kooxaha waa weyn guul gaaray, Chelsea ayaa barbaro gurigeeda kula gashay koxoda Watford halka Leicester iyo Man United ay guuldarooyin kala kulmeen kooxaha Liverpool iyo Stoke sida ay u kala horeeyaan.
Waxaa haatan soconaya kulanka u dhexeeya kooxaha Everton iyo Newcastel waxaan xili danbe oo caawa ah soo gali doona kulanka u dhexeeya kooxaha Arsenal iyo Southampton hadii ay Arsenal guul soo gaarto caawana waxay xaqiijisan doontaa iney yihiin hogaamiyeyaasha horyaalka maadaama ay sibxatay kooxda Leicester saas oo ay tahayna waxay wali ku jiraan kalainta labaad ee horyaalka.
Manchester United ayaa ka dhacday booska shanaad oo ay markii hore ku jirtay waxayna u dhaadhacday kaalinta lixaad waxaana booska shanaad soo galay Crystal Palace oo guul soo gaartay
Hadaba waa sidee kala sareynta horyaalka ee haatan (Ka Hor Kulamada Everton Vs New Castle iyo Southapton Vs Arsenal ) ?
Dad ka soo laabtay Aaska dadkii ku dhintay qarxii Saxafi oo weeraray
10/11/2018 - 14:10:34